नारायणी काण्डः सरस्वतीको चरित्र ठिक थिएन भन्दै जेठानीले खोलिन् सबै वास्तविक कुरा – Sandesh Press
January 26, 2021 136
चितवन । चितवनमा फेरी एक पटक अर्को घटना घटेको छ । जुन घटना यतिबेला हाम्रो समाजमा प्राय घटि रहेकै पाउँछौं । यो वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा श्रीमान विदेश गएको र श्रीमानले कमाएको पैसालाई नेपालमा बसेकी श्रीमतीले हिनामिना गरेको सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा धेरै घटनाहरु घटिरहेका छन् । यो तीनै घटना मध्यको एक हो । बाक्ष्लुंग घर भएका कुल प्रसाद उपाध्याय पौडेलकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले श्रीमानको माटो रकम हिनामिना गरिदिएपछि श्रीमानले आफ्ना कुरा मिडियामा राखेका छन् ।
आफ्नै श्रीमतीले आफ्नै कमाई खाँदा पनि कसरी हिनामिना भयो भनेर आरोप लगाउन सकेको होला भन्ने प्रश्न त छंदै छ । साथै उनको श्रीमतीको लुगा र चप्पल जब नारायणी नदीमा भेटियो तब भने घटनाले अर्को मोड लियो । श्रीमान कुल प्रसादको भनाई अनुसार उनले विदेशमा कमाएको ५ लाख रकमलाई श्रीमतीले हिनामिना पारेकी छन् । के श्रीमानको कमाई देखाउनु पर्छ भनेर होला त ? उनको श्रीमतीले नारायणी नदीको तिरमा आफ्नो लुगा र चप्पल फ्याँकेर श्रीमानलाई भ्रममा पार्न खोजेको ?
श्रीमान विदेशबाट फर्किएपछि घर छाडेकी श्रीमती सरस्वतीको नारायणी नदीमा ज्याकेट र चप्पल भेटिएको थियो । यो घटना हो कुल प्रसाद उपाध्याय र सरस्वती श्रेष्ठ उपाध्यायको । श्रीमानको भनाई अनुसार उनी कतारबाट नेपाल फर्किएपछि रु ५ लाखको हिसाब माग्दा श्रीमती सरस्वतीले घर छाडेकी थिईन् । उनले घर छाडेपछि उनको खोजी गर्दै जाँदा उनले लगाएका लुगा र चप्पल नारायणी नदीको किनारमा भेटिएको थियो ।
सरस्वतीको लुगा र चप्पल नारायणी नदी किनारमा भेटिंदा भने उनका श्रीमान र आफन्तीहरु सरस्वतीले नदीमा हाम फालेर देह त्याग त गरिनन् भन्दै निकै नै डराएका पनि थिए । तर अनुसन्धान गर्दै जाँदा सरस्वती जीवित नै रहेको कुरा पत्ता लागेको छ । उनको अर्कै केटासंग अ’नैति’क स’म्बन्ध रहेको कुरा उनकै जेठानीले खोलेकी छन् । जेठानीको भनाई अनुसार सरस्वतीको चरित्र ठिक थिएन । उनी पहिलादेखि नै खराब बानी र व्यवहार देखाउँदै आई रहेको कुरा उनकी जेठानीले बताएकी छन् ।
जेठानीको भनाईमा सरस्वतीको अ’नै’तिक स’म्बन्ध तराईको एउट मधेशीसंग लामो समयदेखि नै थियो । त्यो केटासंग बोल्नकोलागी सरस्वतीले एउटा फोनको प्रयोग गर्ने र श्रीमानसंग बोल्नकोलागी अर्को फोनको प्रयोग गर्ने गरेको कुरा उनकी जेठानीले खुलाएकी छन् । आफ्नै जेठानीलाई देखाउँदै रात भरी सरस्वतीले उक्त केटासंग कुरा गर्ने गरेको पनि जेठानीले बताएकी छन् । भिडियोसहित
Prevविवाहको खर्च कटाएर रंगशाला निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग
भारतीय चर्चित अभिनेत्री दिव्या भटनागरको मृ’त्युको खास कारण खोलीन् चर्चित कलाकार गोपी बहुले